Wararka - Iskuxidhan: Daaweynta tallaalka Oxford-AstraZeneca inay bilaabato
Naga soo wac: 0086-571-87388030 Naga soo wac: 0086 18100183575
Dharka Keli ahaanta
Gaashaanka Caafimaadka wajiga
Gaashaanka aan wajiga ahayn ee Caafimaadka
Gaashaanka Kid Face
Neefsadeeyaha Nadiifinta Hawada
Cirbadaha la tuuro
Qalabka Daryeelka Caafimaadka Qoyska
Bacda jeermiska UV
Qaboojiyaha Caafimaadka / Talaajo
Gaadiidka Xawilaadda Cadaadiska xun
Tube Muunad Sambal
Kiniin jeermi-dile ah
Iskufilan: Bixitaanka tallaalka Oxford-AstraZeneca inuu bilaabmo
Qiyaasaha ugu horreeya ee tallaalka 'Oxford-AstraZeneca coronavirus jab' waa in la bixiyaa iyadoo Boqortooyada Midowday ay dardargelinayso barnaamijkeeda tallaalka si wax looga qabto kororka xaaladaha.
In ka badan nus milyan qiyaasood oo tallaal ah ayaa diyaar u ah in la isticmaalo Isniinta.
Xoghayaha caafimaadka wuxuu ku tilmaamay "waqti muhiim u ah" dagaalka UK ee lagula jiro fayraska, maadaama talaalku uu gacan ka geysan doono xakameynta infekshinka iyo ugu dambeyntiina ay ogolaaneyso in xayiraadaha laga qaado.
Laakiin Raiisel wasaaraha ayaa ka digay in xeerarka fayraska ee adag laga yaabo in loo baahdo muddada-gaaban.
Boris Johnson wuxuu yiri xayiraadaha gobolka ee England waa “Waxaa laga yaabaa inuu sii adkaado” iyadoo UK ay halgan ugu jirto sidii ay u xakamayn lahayd nooc cusub oo dhakhso u faafa oo fayras ah.
Axadii in ka badan 50,000 oo kiis oo cusub oo la xaqiijiyay oo Covid ah ayaa laga diiwaan galiyay Boqortooyada Midowday maalintii lixaad, taas oo keentay in Labour ay ku baaqaan xirnaanshaha qaran ee seddexaad ee England.
Waqooyiga Ireland iyo Wales hadda waxay leeyihiin qufulkooda u gaarka ah meesha, halka golaha wasiirrada ee Scotland ay kulmi doonaan Isniinta in laga fiirsado tallaabooyin dheeri ah.
Raiisel wasaaraha ayaa filaya 'tobanaan milyan' oo irbado ah bisha Abriil
Goorma ayaad xaq u yeelan doontaa tallaalka 'Covid'?
Maxay macnaheedu noqon karaa 'adag' tallaabooyinka coronavirus?
Lix ka mid ah isbitaallada lagu kalsoon yahay - oo ku kala yaalla Oxford, London, Sussex, Lancashire iyo Warwickshire - ayaa bilaabi doona maamulidda tallaalka Oxford-AstraZeneca Isniinta, iyada oo loo diyaarinayo 530,000 qaadasho.
Inta badan daawooyinka kale ee la heli karo waxaa loo diri doonaa boqolaal ka mid ah adeegyada GP-ga hogaamiyo iyo guryaha daryeelka ee guud ahaan Boqortooyada Ingiriiska dhamaadka usbuuca, sida ay sheegtay Waaxda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada (DHSC).
Xoghayaha caafimaadka Matt Hancock ayaa yiri: "Tani waa waqti muhiim u ah la dagaalanka virus-kan xun waxaana rajeynayaa inay rajo cusub siiso qof walba in dhamaadka cudurkaan uu soo socdo."
Laakiin wuxuu ku booriyay dadka inay sii wadaan inay raacaan tilmaamaha kala fogaynta bulshada iyo xeerarka coronavirus ee "kiisaska hoos loo dhigo lana ilaaliyo kuwa aan jecel nahay".
Maaddaama dhowaan soo ifbaxay kiisaska loo yaqaan 'Covid' ay cadaadis dheeraad ah saareyso NHS-ta, Boqortooyada Midowday waxay dardargelisay soo saarista tallaalkeeda iyada oo qorsheyneysa in labada qaybood ee tallaalka la siiyo 12 toddobaad oo kala durugsan, iyada oo markii hore qorsheysey in ay ka tagto 21 maalmood inta u dhexeysa tallaallada.
Saraakiisha caafimaadka ee Boqortooyada Midowday ee UK ayaa difaacay dib u dhaca ku yimid qaadashada labaad, iyadoo la leeyahay in la helo dad badan oo lagu tallaalo tallaalka koowaad "ayaa aad looga door bidaa".
Ha qaldamin, Boqortooyada Midowday (UK) waxay ku jirtaa tartan ka dhan waqtiga.
Taasi wax badan ayey ku cadahay go'aanka dib u dhigista qiyaasta labaad ee tallaalka si diirada loo saaro bixinta dad badan intii suurtogal ah qaadashadooda koowaad.
Waxaa jira cadeymo muujinaya in laga yaabo inay ka dhigto tallaalka Oxford-AstraZeneca mid wax ku ool ah, laakiin way u cadahay Pfizer-BioNTech maaddaama tijaabooyinka aysan u eegin isticmaalka tallaalka sidan.
Laakiin xitaa haddii wax lumo marka laga hadlayo kahortaga infekshinka, hal qiyaas ayaa wali dhalisa jawaab celin difaac ah oo kaa caawin doonta kahortagga jirrada halista ah.
Marka dhakhso intee le'eg ayey NHS u socon kartaa? Ugu dambeyntii waxay dooneysaa inay hesho laba milyan oo qiyaasood usbuucii.
Taas laguma guuleysan doono toddobaadkan - waxaa loo maleynayaa inay jiraan ku dhowaad hal milyan oo qiyaas oo ah labada tallaal ee diyaar u ah in la isticmaalo.
Laakiin maanta waxay calaamad u tahay bilowga NHS-ka oo xawaaraha dhulka dhigaya.
Korodhka degdegga ah ee heerka tallaalka waa inuu raacaa.
Xaqiiqdii, qodobka xaddidan ayaa si fiican u noqon kara sahayda halkii uu ka ahaan lahaa xawaaraha ay NHS ku tallaali karto.
Baahida loo qabo tallaalka adduunka, hubinta inay jiraan qiyaaso ku filan oo diyaar u ah-tagitaan waxay u badan tahay inay noqdaan caqabadda ugu weyn.
Tallaalka Pfizer-BioNTech wuxuu ahaa tallaalkii ugu horreeyay ee laga oggolaado Ingiriiska, in kabadan milyan qofna waa lasiiyay tallaalkoodii ugu horreeyay.
Qofka ugu horeeya ee lagu tallaalo 8-dii Diseembar, Margaret Keenan, ayaa durba qaadatay qaadashadeedii labaad.
Jabkii Oxford - kaas oo loo ansixiyay in la isticmaalo dabayaaqadii bishii Diseembar - waxaa lagu keydin karaa heerkulka qaboojiyaha caadiga ah, taasoo sahleysa in la qaybiyo oo la keydiyo marka loo eego tallaalka Pfizer. Sidoo kale waa ka raqiisan yahay qiyaaskiiba.
Boqortooyada Midowday (UK) waxay xaqiijisay 100 milyan oo qiyaas oo ah tallaalka Oxford-AstraZeneca, oo ku filan dadka intiisa badan.
Daryeelka guryaha iyo shaqaalaha guryaha, dadka da'doodu ka weyn tahay 80 sano, iyo shaqaalaha safka hore ee NHS ayaa ugu horreeya helitaanka.
Dhakhaatiirta GP-ga iyo adeegyada talaalka ee deegaanka ayaa laga codsaday inay hubiyaan in guri daryeel kasta oo ku nool agagaarkooda la tallaalo dhamaadka bisha Janaayo, ayay tiri DHSC.
Ilaa 730 goobood oo tallaal ah ayaa durba laga hirgeliyey Boqortooyada Ingiriiska oo dhan, iyadoo wadarta guud loo qoondeeyey inay dhaafi doonto 1000 dhammaadka toddobaadkan, waaxda ayaa intaa ku dartay.
Waqtiga boostada: Jan-04-2021
302, Dabaqa 3aad, Dhismaha 6, No. 688 Bin'an Road, Degmada Binjiang, Hangzhou